Sidee inaan ku saxno - iPad ku xayiran on Logo Apple ee Screen
> Resource > iPad > iPad ku xayiran on Logo Apple ee Screen - Sidee inaan ku saxno
"Ma noqon karaa mid ka careysan iPad hadda. Waxa ay haatan ku xayiran on logo screen Apple ah. Ma doonayo in aan iska kasta oo macluumaadka ku yaal oo ay u soo celinta. Waxaan isku dayay in ay wax miiran Guriga iyo Power badhamada, laakiin milicsiga lahayn. Ma soo celinta sida kaliya si uu u xaliyo tan nuugaan dhibaatada? "
Marka iPad waxaa ku xayiran on Apple logo screen, ikhtiyaarka kaliya ee Apple siinayaa waa in la soo celiyo aad iPad. Si kastaba ha ahaatee, soo celinta aad iPad masixi doono dhammaan macluumaadka iyo content qalabka. Haddii aad rabto in aad sii xogta oo dhan on your iPad iyo hagaajin 'iPad ku xayiran on logo Apple ee shaashadda' ah waqti isku mid ah, waa inaad isku daydaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) . Waxay kaa caawin doona inaad u xaliyo dhibaatada ee iPad stucking on logo screen Apple ee aan laga badinin wixii xog ah. Fiiri tallaabooyinka fudud ee hoose sida si aad u hesho iPad fiican u shaqeeyaan dib.
Tallaabada 1. Download Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Riix badhanka Download si aad u hesho xirmo rakibidda Wondershare Dr.Fone ee macruufka ah. Hadda version kala gooni ah u Windows iyo Mac waa avaialable. Waa in aad kala soo bixi version saxda ah sida uu nidaamka qalliinka of your computer ah. Ka dib markaas, rakibi barnaamijka on your computer oo abuurtaan. Ka dib markaas, xiriiriyaan iPad la your computer via cable USB ah.
Markii barnaamijka ogaadaa aad iPad oo soo bandhigay uu furmo suuqa ugu weyn, waa in aad riix "Dayactir Operating System" tab on sare ee barnaamijka. Ka dib markaas, waxaad arki kartaa dhammaan isbeddellada in feature ka keeni doonaa iPad uu furmo suuqa ee "System Operating Repair". Haddii aad wax kama qaba mid ka mid ah isbedelada, guji "Next" in ay sii wadaan.
Muhiim: Fadlan la soco in ay si qamaar arrinta - iPad xayiran Apple logo, macruufka ah ee aad iPad la cusbooneysiin doonaa in nooca ugu dambeeya. Oo neefku hadduu yahay jailbroken iPad, ka dibna waxa la cusbooneysiin doonaa si ay u ma jiro jailbroken.
In uu furmo suuqa cusub, ka link firmware download rasmiga ah ee macruufka ugu dambeeyay ee aad iPad waxaa la siin doonaa. Waa in aad kala soo bixi firmware ku on your computer la link idinku Arzaaqay. Haddii aad soo bixi firmware ku drive deegaanka of your computer ka hor, markaas halkan kaliya aad u baahan tahay inaad guji "Durba soo bixi" xitaa your computer si aad u heshaan.
Tallaabada 4. Fix iPad ku xayiran on Apple logo
Ka dib markii ay soo degsado iyo xulashada firmware rasmiga ah ee aad iPad, riix batoonka "Fix bilow" si aynu barnaamijka si uu u xaliyo iPad ku xayiran on Apple logo arrinta. Ka dib markaas, kaliya sugi iPad ku guuleysatey. Ka dib markii howleheedii, aad arki doonaa dhammaan macluumaadka aad iPad weli jiraan.
Isku day Wondershare Dr.Fone ee macruufka si uu u xaliyo iPad ah ku xayiran on dhibaato logo Apple!